ဗီတာမင် ဘီ ၁၃ | Moe Naymin
ဗီတာမင် ဘီ ၁၃ တွင် orotic acid နှင့် pyrimidine carborylic acid တို့ ပါဝင်ပြီး အူအတွင်းရှိ ကိုယ်ခန္ဓာအကျိုးပြု Flora များမှ ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ထို ဗီတာမင်အကြောင်းကို ယနေ့အထိ အသေးစိတ် သေသေချာချာ မသိသေးပါဘူး။ ဗီတာမင် ဘီ ၁၃ ကို အမဲသားမှ ပိုမိုရရှိနိုင်ပြီး အနီရောင်ရှိသော အသားများတွင်လည်း အနည်းငယ်တွေ့ရသည်။ အသီးအရွက်များတွင်လည်း ပါဝင်သည်။
Folic acid နှင့် Vitamin ဘီ ၁၂ အစာခြေဖျက်ခြင်းအတွက်ု အရေးပါသည်။ မျိုးရိုးဗီဇ cell များအတွက်လည်း အရေးကြီးသည်။ နှလုံးရောဂါ၊ အသည်းရောဂါ ကုသခြင်းများအတွက်လည်း တစ်ခါတစ်လေ အသုံးပြုသည်။ အရေပြား၊ ဆံပင်နှင့် လက်သည်းများကို ကောင်းမွန်စေသည်။ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းမှလည်း ကာကွယ်နိုင်၏။ အမိုးနီးယားဓါတ် လွန်ကဲခြင်းမှလည်း လျော့ချပေးသည်။ ခန္ဓာကိုယ် အကျိုးပြု အူတွင်း Flora များကို ပျက်စီးစေသည့်အကြောင်းအရင်းများသည် နာတာရှည်ဖျားခြင်း၊ ခဏခဏ ၀မ်းချုပ်ခြင်း၊ တုတ်ကောင်များ၊ သံကောင်များ၊ အူတွင်း PH ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း၊ ဆေးဝါးအများအပြား သောက်သုံးရခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း၊ အရက်သောက်များခြင်း၊ အစားအစာချို့တဲ့ခြင်း၊ အူရောင်ခြင်းရောဂါ၊ Candida များအလွန်တိုးပွားလာခြင်း၊ ၀မ်းပိတ်ခြင်း၊ ၀မ်းလျှောခြင်း၊ လေပွခြင်း စသည်တို့ ကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဘီ ၁၃ ချို့တဲ့လျှင် ဆီး၌ ခရစ်တယ်များ ပါလာခြင်း၊ ဆဲလ်များ ပျက်စီးခြင်း၊ ခုခံအားကျဆုံးခြင်း၊ သွေးအားနည်းရောဂါ၊ ဗီတာမင် ဘီ (၁၂) ခန္ဓာကိုယ်ထဲ၌ လျော့နည်းခြင်း၊ နှလုံးနှင့် ပတ်သက်သည့်ရောဂါများ၊ ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်း၊ အရေပြားရောဂါ၊ စိတ်ကစဉ့်ကလျားဖြစ်ခြင်း၊ အသည်းရောဂါ၊ စိတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ အရွယ်မတိုင်မှီ အိုမင်း ရင့်ရော်ခြင်း ၊ စသည်များ ဖြစ်တတ်သည်။
Vitamin B13 having chemical names orotic acid and pyrimidine carboxylic acid is the vitamin which is synthesized by the natural flora of the intestine. This vitamin is not fully known till now. Only few functions are recognized in our body. Orotic acid is one of the intermediate compounds in the pyrimidine metabolism. Orotic acid results in formation of insoluble inorganic salt withamineral called orotate. Many mineral nutrients such as potassium, calcium as well as magnesium are available in the form of orotate. These orotatic forms of minerals are easy to absorbed and used by the body. They can easily be transported from the gut into the blood with the help of orotate salts. As they reach the blood, the minerals get separated from the orotate. The minerals then become free and available to exert their therapeutic as well as pscyological functions.
Animal sources: These include meat especially the beef.
Plant sources: It is found in the whey as well as in certain vegetables.
It is important for metabolism of folic acid and the vitamin B12.
Vitamin B13 (Orotic Acid) is found to be important in genetics.
It is used in the treatment of certain heart diseases as well as liver diseases.
It is good in the treatment of dangerous diseases such as multiple sclerosis (MS).
Vitamin B13 provides health to the skin as well to the hairs and nails.
It prevents from the aging particularly premature aging.
It is beneficial in those patients who have suffered from heart attack; there it may prevent its recurrence in those patients. Especially magnesium orotate which is found useful in reducing the severity of heart diseases of chronic nature. It prevents heart remodeling as well.
Determination of orotic acid is found beneficial in delineating certain causes such as the cause of increase levels of ammonia (hyperammonemia)
Orotic acid seems to have some direct effects on metabolism of folic acid. Both the folic acid and orotic acid take parts in DNA synthesis. Its vitamin like effects is thought to be because of this reason that it helps in DNA and RNA manufacturing in the body.
It is an important indicator of ammonia disorders related to its metabolism that can lead to illnesses or even death in people with inborn errors of metabolism asaresult of defect in urea cycle or other genetic problems. People having abnormal liver functions because of some viral infections, drug abuse or alcoholism and people with bleeding from their digestive tract usually excrete increase levels of orotic acid in their urine.
The destruction of intestinal flora is caused by other culprits as well:
Mercury released from dental amalgam fillings
Abnormal Intestinal pH
Poor diet (Basically, the fast-food, processed Amercian diet)
So what happens when the good intestinal flora is disturbed (or destroyed) and becomes unbalanced? A progression of other illness occurs such as:
Variety of Gastrointestinal Diseases
Usually deficiency of this vitamin is rare but in case of its severe deficiency there arises following signs and symptoms as follow;
Appearance of crystals in the urine
Large and abnormal sized blood cells
Disorders within the liver
Complaints of premature aging